Kelly Jenner oo 20 jir ah ayaa lagu wadaa in ay noqoto Bilyaneerada ugu da’da yar… – Hagaag.com
Kelly Jenner oo 20 jir ah ayaa lagu wadaa in ay noqoto Bilyaneerada ugu da’da yar…
Majallada Forbes ayaa xustay in Kelly Jenner oo 20 jir ah, ayaa lagu wadaa in ay noqoto bilyaneerada ugu da ‘da yar Maraykanka, iyada oo loo celinayo abaalkaasi shirkadda alaabaha la isku qurxiyo oo ay abuurtay labo sano ka hor.
Jenner, oo la ah walaalo dhinaca hooyada Kim, Chloe iyo Courtney Kardashian, ayaa bilowday shirkada Kelly Cosmetics sanadkii 2016 kii, iyadoo ku bilowday waxyaabaha bishimaha ay marsadaan dumarka oo qiimihiisu yahay $29, tan iyo markaasi waxay iibisay alaab u dhiganta 630 milyan dollar.
Forbes ayaa sheegtay in ay ku qiimaysay shirkadeeda $ 800 million, Jenner ayaana leh 100 boqolkiiba saamiga shirkadeeda. Waxay intaas raacisay in malaayiin bandhigyo TV ah, xayeeysiin oo shirkada faa’iido u leh ka dib canshuuraha ay soo galaan, guulaha Jenner waxay gaadhay ilaa $ 900 milyan.
Wargeyska ayaa xaqiijiyay haddii sanad kale beeceeda sidan ku socoto, Jenner waxay noqon doontaa bilyaneerada ugu da’da yar rag iyo dumarba.